IXESHA LE-ATYPICAL 4- UKUKHUTSHWA KWENETFLIX, ICAST KUNYE NEPLOTI, ULINDELO ONOKUTHI ULUPHOSE KUNYE NOHLAZIYO OLUNINZI - IINKQUBO ZETV
Ixesha le-Atypical 3 lalikwilayibrari yeNetflix ekuqaleni kukaNovemba kunyaka ophelileyo. Ngokukhawuleza nje abalandeli
Ixesha le-Atypical 3 lalikwilayibrari yeNetflix ekuqaleni kukaNovemba kunyaka ophelileyo. Ngokukhawuleza nje ukuba abalandeli bagqibe ngothotho lweNetflix yoqobo. Imibuzo malunga nexesha elizayo iqale ukubonakala ezingqondweni zabo.
Inamba yenkosana yenyoka 4 ukukhutshwa komhla we-2020
Uthotho lweNetflix lweNetflix lubonisa ibali lomntu oneminyaka eli-18 ubudala kwirediyo engeniswe kwezonyango. Ibali liyaqhubeka ngelixa enyathela inyawo lakhe kwindawo yokuthandana. Uthotho lweAtypical lukhuphe malunga namaxesha amathathu. Ixesha ngalinye libandakanya iziqendu ezilishumi. Nangona isizini yokuqala ingakhange ihambele kumbono wabaphulaphuli abaninzi, ixesha lonyaka elizayo likwazile ukubamba ingqalelo enkulu.
Ixesha le-Atypical 4: Liza kukhutshwa nini?
Kuyabonakala ukuba i-Netflix yasekuqaleni iqukumbela emva kwamaxesha amathathu okanye amane. Ke, ngekhe ibe yinto ephosakeleyo ukuthi i-Atypical ngoku iyaqhubeka ukuya kumaxesha ayo okugqibela. Oku kuphakamisa ulindelo lwabalandeli ukubona ukuba ziziphi izinto ezintsha eziza kusizisela ixesha elizayo.
I-Netflix ikhutshwa ngokubanzi amaxesha amatsha kwisithuba sonyaka. Ngexesha lesithathu lakhutshwa ngo-Novemba ophelileyo, ixesha le-4 lalifanele ukuba liboniswe ngokuphela konyaka. Kodwa umhla wokukhutshwa unokuba notshintsho oluthile ngenxa yesifo esiqhubekayo se-COVID-19. Ke, umhla wokukhutshwa unokufika ngaxa lithile ngo-2021. Uyakwaziswa ngokukhawuleza xa iindaba ziphuma!
Ixesha le-Atypical 4: Liya kuba yintoni iplani yeXesha lesi-4?
Kutshanje kudliwanondlebe, uBrigette Lundy-Paine, umdlali odlala uCasey, wabuzwa malunga nokuziphendukela komlinganiswa wakhe kumaxesha onyaka, awathi wavakalisa ukuba uCasey ukwiminyaka emncinci kakhulu ye-16. Ucinga ukuba uCasey uzama Yixake yonke into esebenzayo kwaye yintoni emzisela uxolo kunye nolonwabo ngelixa yonke into ejikeleze yena inesiphithiphithi.
Nangona kunjalo, ukhulile ngelixa ekwisiphithiphithi, kwaye nosapho lwakhe belukwisiphithiphithi kwaye bazama ukujongana nalo ngokulunciphisa. Nangona esekwishumi elivisayo, udlala kakuhle indima yomkhuseli wosapho. Kodwa ngoku, uCasey uqalile ukuphuhlisa le mvakalelo kwintombi yakhe, uIzie. Kwaye ixesha lesithathu liphela ngokuncamisana okokuqala kuka-Casey noluntu no-Izzie.
Iya kuba mnandi ukufumanisa loo nto.
Ixesha le-Atypical 4: ngoobani bonke abaya kuba neenkwenkwezi kwiXesha lesi-4?
Ukuza kuthi ga ngoku, siyazi ukuba uKeir Gilchrist uza kuphinda ayidlale indima yakhe njengo-Sam, noJennifer Jason Leigh njengo-Elsa, umama wakhe ophaphileyo. UBrigette Lundy-Paine uza kubuya njengoCasey, udadewabo omncinci kaSam, kunye noMichael Rapaport njengo-Dough, utata kaSam, uDoug.
Ixesha le-Atypical 4: Yintoni Esinokuyilindela Kwinkqubo?
Umvelisi olawulayo, uMary Rohlich, echaza umenzi womboniso uRobia Rashid kwaye wamncoma ngendlela umboniso obonisa ngayo uluntu lwe-autism.
Umvelisi ukwathe lo mboniso uzisa abalawuli abangaphezulu kwabasetyhini kunye nokwahluka kwabasetyhini.
Uqhubeke wathi banolwazi oluninzi malunga nokubonisa bonke abalinganiswa, ngakumbi uSam.
Uye wachaza ukuba njengoko amabali abo eguquka. Baqinisekisa ukuba izinto ziyinyani ngokubonisana neengcali zengqondo kunye nabaphandi.
Ixesha lokugqibela yedrama yeNetflix ngokuqinisekileyo iya kuqhubeka noSam ekholejini. Uya kufunda ukujongana nomntu ahlala naye egumbini, uZahid, onomdla kakhulu.
Ngokufanayo, uCasey ngoku kuya kufuneka azinzise amabhongo akhe omkhondo ngobomi bakhe obutsha bothando. Inye into esiqiniseke ngayo kukuba nantoni na eyenzekayo, iya kuba yinto ehlekisayo.
Umhla wokukhutshwa kwe-aladdin 2
Ikhaka lexesha le-2 yomhla wokukhutshwa ngo-2021
phakathi kwexesha lesibini
jujutsu kaisen isiqendu 1 umhla wokukhutshwa